Izinsiza Zokushicilela Izakhiwo Nezindawo kuRealtyWW
September 08, 2016 by Lesja Poberezhets, Ukubukwa okuphelele:
Uyemukelwa ku-RealtyWW! Lapha kuhlala, kubhala futhi kuthathe umlobi wamakhophi uLesja Poberezhets. Uma usebenzisa izinsiza zami zokubhala ezidayiswa ngomhlaba wami, uzothola incwadi eqinisekisiwe ku-RealtyWW. Ingqondo yokudala, ukufunda nokubhala, uthando lwebhizinisi lakho siqu kungivumela ukuthi ngibhale izinto ezinhle, ezisezingeni eliphakeme, zokuthengisa ezisebenzayo cishe kunoma yisiphi isihloko, kufaka phakathi i-Real Estate, Ukuthuthukiswa Kwasekhaya, Isakhiwo, Ezezimali, iYard neNgadi, iGreen njll.
I-Real Estate Copywriting Professional kwi-RealtyWW
Uzothola kimi umbhali obhalwe phansi onobungcweti, onokwethenjiswa kwezakhiwo, olungele ukubhala isiza sakho noma inkampani / i-aganacy imibhalo ehamba phambili. Ngimncane futhi ngigcwele intatheli yamandla. Eminyakeni yami yokuqala sengivele nginokushicilelwa okuthile kwiRealtyWW. Futhi uma ufuna ukuba nezinto ezikhethekile, ezintsha futhi ezigcwele izinto ezintsha, qiniseka ukuthi ngingumbhali we-athikili ozidingayo! Imibhalo enelungelo lobunikazi - ingqikithi yami. Uma udinga izinsizakalo zomhlinzeki wezinsizakusebenza onamandla wokushicilela izindlu, sizosebenzisana kahle!
Indlela oda insiza yokubhala okuqukethwe?
Silula. Uku-oda izinsizakalo zokubhala ngokuthengisa izindlu noma ezinye izinsiza ezisohlwini oludingayo ungathinta nami nge-imeyili [Email protected] noma ngaleli khasi ku Facebook
Njengombhali wekhophi, ngingakunika:
Imibhalo ihlukile kwisitayela esingasebenzi
Le ndatshana, ebizobhalwa ngokuya ngamagama okhiye / izihloko ezithile bese yabelwa imithombo yezokuxhumana
Ukukhishwa kwezindaba mayelana nenkampani yakho / i-ejensi / iwebhusayithi
Ukugcwalisa indawo yokuqukethwe
Imibhalo enamandla yokuphrinta nokukhangisa
Humusha kahle imibono yakho ibe umbhalo
Bhala imibhalo ethengisa kakhulu
Inkolelo yokuthi imibhalo yokubhala izokwenziwa ngesikhathi
Uqinisekisiwe ukuthola umbhalo oqondile kumugqa wesikhathi
Ukushicilelwa okuqinisekisiwe ku-RealtyWW
Noma yiziphi izinsizakalo zokubhala imibhalo ze-SEO. Noma yimiphi imibhalo. Noma yimiphi imibono. Yenza!
Intengo yami ejwayelekile ingu- $ 10 yezimpawu eziyinkulungwane (cishe amagama angama-1,000), manje usungazi ukuthi iyiphi intengo okufanele uyilindele lapho unikeza ngezinsizakalo zokubhala izindlu.
Kepha konke kuzoncika ekuthini yinkimbinkimbi yomsebenzi kanye nobude bemibhalo ephelele, ngakho-ke thintana nami futhi ngizoqiniseka ukuthi nginikela ngentengo efanelekile.
Kungani nezinsizakalo zokubhala imibhalo yezezakhiwo uyalelwe lapha?
Intatheli Esemthethweni kanye ne-Real Estate Copywriter kwa RealtyWW
Ungahle uthande ukuthola ulwazi oluthe xaxa mayelana nochwepheshe wokubhala ngezezakhiwo ofuna ukuhambisa iphrojekthi yakho. Futhi, mhlawumbe, ulinde izimpikiswano ezingeziwe, ezizokuqinisekisa ekugcineni ukuthi uzisebenzise kimi. Ngibathola ngokwanele.
Manje ngizonikeza ngqo 6 izinzuzo zayo:
Ngimncane futhi ngigcwele imibono eyingqayizivele emisha, ezokwenza i-athikili yakho ihambe phambili futhi akekho ongayinaka.
Ngiyaqonda ukuthi kunababhali abaningi abasebenza ngokufingqiwe nabanolwazi, kepha bonke kungenzeka ukuthi sebekhathele, hhayi ngokuzinikela ngentshiseko emsebenzini wabo futhi benza konke ngokwephethini yakudala, ngaphandle kokusungula. Kepha ingabe udinga umbhalo ofanayo, njengoba amakhulu abanye eba nawo?
Indlela yobungcweti. Ngibe uchwepheshe wokubhala obhalwe phansi osusiwe hhayi ngenxa yesifiso sokufuna imali kwi-blouse entsha noma nginqume ukuzihlalela okungenani okuthile. Kuwo lo msebenzi ngize ngokuzikhethela kahle ukuthi kuseyunivesithi.
Imfundo yobuntatheli. Ngubani omunye ongabhala i-athikili ngendlela efanele, ngokuncintisana, futhi okubaluleke kakhulu ngokunambitha, uma kungenjalo intatheli?
I-wide wide kanye ne-erudition ephezulu. Ngibhala kunoma yisiphi isihloko. Ngokungafani nababhali abaningi angihumushi kuphela umbhalo okhuluma ngobuhle bezingane nokulungiswa kwamakamelo. Ungangethemba ngokuqiniseka ngokubhala i-athikili ngalokho okufunayo.
Ulwazi olufanele lokufunda nokubhala. Vuma, kumnandi kakhulu ukufunda umbhalo unamaphutha. Kepha ngeshwa, izingosi zezinkampani eziningi zinesono kakhulu kulezi. Awufuni ukuba phakathi kwabo?
Khumbula, wonke umuntu kule mpilo wenza okufanele akwenze. Ukubhala imibhalo Wethembe ongoti. Ungazami ukwenza lokhu ngokwakho uma ungaqiniseki ngokufunda kwayo ngokuphelele. Kunababhali abaningi abahle, nabanekhono ku-Inthanethi, engibathandayo futhi engibahloniphayo. Kepha ubuzenzisi, umbhalo ophakanyisiwe wengoma futhi abazi imithetho eyisisekelo, ngaphezulu. Ngenhlanhla, unenhlanhla, ngoba uhlangana nami, ngakho-ke - akukho amaphutha embhalweni wakho.
Amanani angabizi wemibhalo namawebhusayithi. Vele, unentshisekelo, ukuthi zingaki izinkonzo zomlobi wekhophi. Umsebenzi omuhle, kanye ne-sausage emnandi, izicathulo zekhwalithi noma imoto ekhululekile, ngeke kube eshibhile Kodwa imishado ephezulu yegama “igama”, “uhlobo lomkhiqizo” kanye ne- “ngoba nje amanye amaningi kakhulu” ayikho emithethweni yami. Ngenxa yawo wonke lawo maqiniso, ngicabanga ukuthi ama- $ 10 ngezimpawu eziyinkulungwane (cishe amagama angama-1,000) azoba alungile. Kodwa kunoma yikuphi, unganikeza umklomelo wakho.
I-PS Kubalulekile ukukhumbula ukuthi maduzane lapho ubeka khona iwebhusayithi yakho esezingeni eliphakeme, inzuzo ethe xaxa ezokulethela yona, amakhasimende amancane azokuya kubancintisana bakho. Ngithemba ukubambisana okuzuzisayo.
Njengoba imibhalo esezingeni eliphakeme kakhulu mayelana nenkampani yakho izovela kwamanye amawebhusayithi (njenge-realtyWW) njengegunya elingaphezulu kwe-inthanethi ozolithola futhi okuhloniphayo kuzoba uhlobo lwakho.
Ozithobayo, umbhali wekhophi uLesja Poberezhets
5 ngokusekelwe ku 1 amavoti
Izakhiwo Nezindlu, Ukuthuthukiswa Kwasekhaya, Ezokwakha, Ezezimali, IYard nengadi, Oluhlaza
Uma udinga izinsizakalo zomhlinzeki wezinsizakusebenza onamandla wokushicilela izindlu, sizosebenzisana kahle! Uku-oda insiza yokubhala imibhalo ye-real estate
3.4 (68%) 5 amavoti
Lesja Poberezhets September 8, 2016
Le entry safakwa ngo Ukukhangiswa Kwezezakhiwo futhi umake I-Advertising Copywriter, Ukukhangisa Ukubhala, Umlobi Wesihloko, Inkonzo yokubhala i-Article, Insizakalo Yokubhalwa Kweblogi, Ukubhala okushibhile, Umbhali wokuqukethwe, Ukubhala Okuqukethwe, Ukubhalwa kokuqukethwe kwamaWebhusayithi Wezezakhiwo, Okuqukethwe Ukubhala Kwezezakhiwo, Kopisha Bhala, Kopisha Ukubhala, Umlobi we-Copy, I-Copywriter Freelance, I-Copywriter Real Estate, I-Copywriting Real Estate, Izinsiza Zokushicilela, Amanani Wezinsizakalo Zokukopisha, Intengo Yezinsizakalo Zokukopisha, I-Copywriter yezezimali, I-Financial Copywriter, I-Copywriting Yezimali, I-Freelance Copywriter, Umlobi we-freelance, Ukubhala ngokukhululekile, I-Green Copywriting, Ukushicilelwa Komthetho, I-Online Copywriting, Ukubhala kobuchwepheshe, Ukubhalwa Kwempahla, Ukubhala Kwezindlu Nezindlu, Okuqukethwe Kwebhulogi Lezakhiwo, Umhlinzeki Wokuqukethwe Kwebhulogi Lezakhiwo, Umbhali Wokuqukethwe Kwezezakhiwo, Ukubhala Okuqukethwe Kwezezakhiwo, Umshicileli Wezindlu Nezindawo, I-Real Estate Copywriting, Izinsizakusebenza Zokushicilela Izakhiwo, Ukubhala kokuqukethwe kwe-SEO, I-SEO Copywriting, Izinsizakalo Zokushicilela ze-SEO, Ukubhala kwe-SEO, Umbhali Wokuqukethwe kweWebhu, Izinsizakalo Zokushicilela I-Web, Ukubhala Okuqukethwe Kwamawebhusayithi, Izinsiza Zokushicilela Iwebhusayithi, Izinsiza Zokubhala. Bookmark Permalink.
September 15, 2016 Iposi Yezindwendwe Zezindlu. Izizathu Zokusibhalela Kubaluleke kakhulu ukuqaphela ukuthi ukubhuloga izihambeli zempahla ethengiswayo (ukuthumela izihambeli) kuyindlela ephumelelayo yokuphromotha eye yakhombisa izinzuzo zayo futhi ikhombisa imiphumela emihle. Uma (noma inkampani yakho) ungabanazo izindatshana ezithile ezihlobene nesibalo sethu ofuna ukusithumela mahhala kubhulogi lethu lezivakashi ezithengiswayo - sicela ulandele leli khasi. Futhi ungabathumela kuphrofayela yami ye-myblogguest noma ubathumele ngokunamathisela ku- - [Email protected] kunoma iyiphi ifomathi efanelekile kuwe. Anazi […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
September 12, 2018 Izindlela Eziqinisekisiwe Zokubhala Amabhulogi Wezakhiwo Ukubhuloga manje sekuba yingxenye ebaluleke kakhulu yokuthuthukisa ibhizinisi lakho emhlabeni wokuthengisa wedijithali. Lapho bonke abanikazi bebhizinisi be-inthanethi bezama imizamo yabo kule ngxenye ke kungani osomabhizinisi bezezindawo bahlala ngesandla esingenalutho ngaphandle kokusebenzisa le nketho yokuphakamisa intshisekelo yokuthuthukisa ibhizinisi labo kuwebhu? Yebo, kunezindlela eziningi ongazama ngazo ukusungula ibhizinisi lakho lendawo ethengisa izindlu online phakathi kwezithameli zakho ezihlosiwe. Kubhalwa amabhulogi kwenye indawo ethengiswayo […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
July 1, 2016 Ukukhangiswa KweBhengezo Lentengiso Kwezezakhiwo Kumanani Ahibhile - Ku-RealtyWW Ngaphandle kokuthi i-realtyWW iyinethiwekhi yokukhangisa yamahhala, sinikezela nangezinye izinsizakalo ezikhokhelwayo njengokukhangiswa kwama-banner kushibhile kuwebhusayithi yethu. Ngakho-ke uma ufuna indawo ongazikhangisa ngayo nesibhengezo sendawo ethengiswayo eshibhile - ukukhetha okungcono kakhulu kuwe kufanele kube iwebhusayithi yezezindawo ezinjenge-realtyWW Kulesi simo isikhangiso sakho sizoba esifanele kakhulu kokuqukethwe kwewebhusayithi bese ulindela ukufinyelela kwi-CTR ephezulu kakhulu. Futhi singemukela amabhanela angewona ama-real estate e- […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
September 19, 2016 Kusebenza Kangakanani Ukukhangisa Kwemidiya Ehlukile Emkhakheni Wezakhiwo Nezakhiwo? Ukukhangisa kudlala indima enkulu empumelelweni yawo wonke amabhizinisi. Ngokuvamile, ukukhangisa kusiza abamele brand, ibhizinisi nabamabhizinisi ukufinyelela abantu abaningi futhi babazise ukuthi wenza ibhizinisi noma kubenza baqonde ukuthi wenzani empeleni. Abathengisi bezezakhiwo ngeke bakubukele phansi ukubaluleka kokukhangisa ngemidiya ehlukile uma befisa ukuphumelela embonini yezezakhiwo. Amasu ahlukene wokukhangisa nemikhangiso angakhiqiza ngempela […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
February 21, 2019 Ungayithola Kanjani Umenzeli Wokuthengiswa Kwezezakhiwo Ongcono Kakhulu? Amathiphu ongawalandela Yebo, abenzeli bezindlu ezithengiswayo yibona bantu abaphatha ukuthenga nokuthengisa izakhiwo ezahlukahlukene. Kukhona izinkulungwane zabathengisi bezindlu ezithengiswayo ezikhona emakethe, futhi bonke banamakhono namakhono abo. Abanye abenzeli bezindawo abathengisa izindlu abanolwazi futhi bahlonishwa kakhulu kunabanye. Akukhona ukuthi lokhu kuphela, abenzeli bezindawo bethengisa izakhiwo labo abanolwazi olunzulu futhi bathande kakhulu ukukhokhiswa imali ephezulu kubantu ngokunikela ngezinsizakalo zabo. Kepha into esemqoka ukuthi ukuthola izinsiza ku- […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo
February 7, 2019 Ungawuthola Kanjani Umhlaba eNevada Noma Izindali Zikahulumeni Umhlaba uwukutshala imali okunenzuzo futhi ukuyithenga kuyabiza kakhulu namuhla kunangaphambili. Akunandaba nesabelomali sakho, ungathola umhlaba endalini kahulumeni. Umbuso uvame ukuhlinzeka ngomhlaba othengiswayo ngamanani angabizi. Ngokuthola inzuzo ethe xaxa namuhla, ukuqonda ukuthi ungatshala imali kanjani kuyo endalini kahulumeni kunconyelwa kakhulu. Ngenhlanhla, manje kungenzeka ukubheka isiza esinokwethenjelwa sendawo kahulumeni etholakalayo lapho ithengiswa ezindaweni zasemakhaya nasemaphandleni eNevada […] Posted in Ukukhangiswa Kwezezakhiwo